MOMBA NY EPONT JACK - Mpanamboatra Crane Motera tsara indrindra sy Jack gorodona
Nahazo mari-pankasitrahana maro momba ny vokatray izahay amin'ny lafiny kalitao sy fanavaozana.
Zhejiang Yipeng Machinery Co., Ltd. dia naorina tamin'ny 2006.
Izay hita ao afovoan-tanànan'i Yangtze delta ara-toekarena, Jiaxing, izay akaikin'i Shanghai, Hangzhou, Ningbo, Suzhou tanàna, sns, izay tena mety amin'ny fitaterana.
Ny orinasa dia famoriam-bola isan-karazany Engine Crane, Floor Jack 3T, Floor Transmission Jack izay orinasa manokana ho an'ny fikarohana, fampandrosoana, famokarana sy ny varotra.
Ny orinasa dia mandrakotra faritra 17000 metatra toradroa, ny orinasa dia maka "Reputation mifototra, kalitao voalohany" filozofia fandraharahana, mba hanome mpanjifa amin'ny vokatra tsara, tsikelikely, ny fametrahana ny laza tsara eo amin'ny orinasa, orinasa mitombo. YIPENG minoa miaraka amin'ny fiarahanao, hisy rahampitso tsaratsara kokoa, minoa YIPENG, fidio YIPENG, midira YIPENG, homenay anao ny serivisy sy antoka tsara indrindra.
Nanolo-tena izahay hamokatra vokatra tsara indrindra amin'ny vidiny mifaninana indrindra. Noho izany, manasa amim-pahatsorana ireo orinasa liana rehetra izahay mba hifandray aminay raha mila fanazavana fanampiny.